उर्जा सिस्टेम शहरी,, हेडफोनहरू तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो? | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | सामान्य, मोबाईलहरू, समीक्षा
आज यो फेरि छुन ऊर्जा Sistem फर्म बाट एक उपकरण। र हामीले केहि दिनका लागि परीक्षण गर्ने अवसर पाएका छौं त्यस पलको सब भन्दा माग गरिएको ग्याजेटहरू मध्ये एक, केही हेडफोन। यस अवस्थामा यो ऊर्जा प्रणालीको पालो थियो शहरी 4.
यदि तपाईंले अहिलेसम्म वायरलेस हेडसेट प्राप्त गर्ने निर्णय गर्नुभएन भने, आज हामी तपाईंलाई ल्याउँछौं चाखलाग्दो विकल्प। हामी हेर्छौं कि हेडफोनहरू कसरी हाम्रो स्मार्टफोनहरूसँग "आवश्यक" भएको छ। र आजका बजारमा प्रभुत्व जमाउने विकल्पहरूको बीचमा हामी हामी तपाईंलाई एउटा ज्यादै चाखलाग्दो ल्याउँदछौं।
1 ऊर्जा सिस्टेम शहरी,, तपाईले खोजिरहनुभएको हेडफोन
2 ऊर्जा सिस्टेम शहरी4को डिजाइन र शैली
3 तपाईंको संगीतको लागि उत्तम टेक्नोलोजी
4 डाटा पाना ऊर्जा Sistem शहरी 4
5 शहरी Pro मा ऊर्जा सिस्टेमबाट पेशेवरहरू र विपक्षहरू
ऊर्जा सिस्टेम शहरी,, तपाईले खोजिरहनुभएको हेडफोन
हामी देख्न सक्छौं, आज त्यहाँ लगभग धेरै प्रकारका हेडफोन छन् त्यहाँ स्मार्टफोनहरू छन्। प्रत्येक निर्माताले हालका महिनाहरूमा बजारमा एक वा बढी फरक मोडलहरू सुरू गरेका छन्। र यति धेरै उत्पादनहरू उपलब्ध भएको साथ, सही छनौट गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ।
con उर्जा साइटम शहरी head हेडफोन हामी अन्य धेरै मानिसहरू माझ पाउन सक्ने सम्भावना पाउँछौं। त्यसोभए तपाईं जान्न सक्नुहुनेछ कि ती तीनै हुन् जुन तपाईले खोज्दै हुनुहुन्छ, यो पोष्ट पढिरहनुहोस्। अर्को हामी तपाईलाई यी एनर्जी सिस्टेम हेडफोनको बारेमा सबै कुरा बताउनेछौं। तपाईले खोजिरहनु भएको छ भने अर्को विकल्प चाखलाग्दो हुन सक्छ एक मूल उत्पाद, एक राम्रो मूल्य मा र कुनै पनि अन्य उत्पादकको कुनै पनि मोडलमा ईर्ष्या गर्न केहि पनि साथ। अहिले खरिद गर ऊर्जा सिस्टेम शहरी। उत्तम मूल्यमा अमेजनमा।
ऊर्जा सिस्टेम शहरी4को डिजाइन र शैली
यदि हामी यी एनर्जी सिस्टेम हेडफोनको आकार र डिजाइनमा हेर्छौं भने हामीले उनीहरूलाई एयरोपडहरू जस्तो नहुन भनेर धन्यवाद दिन सुरु गर्नुपर्नेछ। हामीले असंख्य फर्महरू हेरीरहेका छौं कि एप्पल हेडफोनबाट "प्रेरित" उत्पादनहरू बनाउन प्रयास गरिरहेछौं। हामी जहिले मौलिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छौं जुन अरू जस्तो देखिँदैन।
सहरी of को संस्करण जुन हामीले समीक्षाको लागि प्राप्त गरेका छौं एक राम्रोमा आउँदछ भनिलाको पहेंलो रंग। एक स्वर जुन, हेर्नको लागि अत्यन्तै प्रहार गर्नु टाढा, कुनै हिसाबले मिल्दैन। तिनीहरूको सामग्री स्पर्श गर्न धेरै रमाईलो र प्रतिरोधी लाग्छ। हातमा, दुबै कभर र हेडफोन छन् एक उपयुक्त वजन। र कान मा राखिएको तिनीहरू न त झर्छ न त चिन्तित नै हुन्.
उत्तम मूल्यमा अमेजनमा अब ऊर्जा सिस्टेम शहरी Buy खरीद गर्नुहोस्
हामी हेर्न चाहन्छौं कि कसरी उही निर्माताबाट उनीहरू हेडफोनको बिभिन्न मोडेलहरू बनाउन सक्षम छन्। र केहि अरु जस्तो नदेखी ती गर्नुहोस्। राम्रो डिजाइन र राम्रो सामग्री तर आकृति र रंगका बारे विभिन्न स्वादको लागि सम्भावनाहरूको साथ। प्रस्ताव एउटै क्षेत्र भित्र बिभिन्न उत्पादनको दायरा यो त्यस्तो चीज हो जुन सबै प्राप्त गर्न सक्षम हुँदैनन्।
कभर शहरी4को छ क्याप्सूल आकार चारै तिर गोलो। एक एक जेबमा बोक्नका लागि सानो आकार उत्तम। एक संग चुम्बकीय बन्दको साथ ढक्कन जसले सुनिश्चित गर्दछ कि तिनीहरू लापरवाहीपूर्वक खुला छोड्दैनन्। भित्र, हेडफोनहरू दुई छुट्टै प्वालहरूमा आराम गर्दछन्, म्याग्नेटाइजेटेड पनि, जसमा उनीहरूको ब्याट्री चार्ज हुन्छ। र हामी यसलाई पूर्ण शुल्कको लागि जडान गर्न सक्छौं माइक्रो USB पोर्ट जुन पछाडि अवस्थित छ।
म्यान र कार्गो बक्स छ केवल २ grams ग्रामको वजन। यो वजन गर्न हामी जोड्न हुनेछ प्रत्येक इयरफोनको वजन, त्यो हो4ग्राम। कुलमा हामी grams 34 ग्रामको बारेमा कुरा गर्दैछौं, तपाईंले यो पनि याद गर्नुहुनेछ कि तपाईं तिनीहरूमा तिनीहरू छन्। र पोष्टहरू ती तौल वा आफ्नो कान कष्ट छैन। अविश्वसनीय छ कि यस्तो हल्का वजनको साथ तिनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछन् २.back घण्टा सम्म प्लेब्याक, तपाइँ सोच्न भन्दा कमको लागि यो तपाइँको हुन सक्छ. एक स्वायत्तता जुन हामी जान्दछौं भोल्युम स्तरमा निर्भर गर्दछ जुन हामी तिनीहरूको प्रयोग गर्छौं।
तपाईंको संगीतको लागि उत्तम टेक्नोलोजी
त्यसैले ब्याट्री जहिले पनि तयार हुन्छ, केस / चार्जरको साथ यस प्रकारको हेडफोन स्वचालित रूपमा खोल्नुहोस् वा बन्द गर्नुहोस्। बक्स खोल्दा हाम्रो स्मार्टफोनको साथ कनेक्शन स्वत: हो। उही तरीकाले, जब हामी तिनीहरूको मामलामा फर्कन्छौं, ती डिस्कनेक्ट हुन्छन् र चार्ज सुरु हुन्छन्।
टेक्नोलोजी साँचो वायरलेस स्टेरियो यो के हो कि यस प्रकारको हेडफोन पूर्ण रूपमा वायरलेस गर्दछ। यो हाम्रो फोनको साथ पहिलो पटक समिकरण गर्न पर्याप्त हुनेछ हामी तिनीहरूलाई खोल्छौं र हामीले पहिले नै सबै कन्फिगरेसन पूरा गरिसकेका छौं। ग्याजेटको मज्जा लिन चाँडो र यति राम्रो तरीकाले सम्भव।
धन्यवाद चुम्बकीय कार्गो बक्स आधार, हेडसेट ठाँउ ठीक फिट बस यो स्थान मा जारी गरेर। केहि चीज जुन हामी यस मामलामा अभाव पाउँदछौं त्यो एक वा अधिक LEDs चार्ज स्तर जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हो। दुबै हेडफोन र उनीहरूको चार्जर। यदि सहर are हुन् जुन तपाईं खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई ढुवानी लागत बिना अमेजन मा अब खरीद गर्नुहोस्.
एउटा सुधार जुन हामीले अन्य हेडफोनको सम्बन्धमा अवलोकन गर्दछौं, उही समान फर्मबाट पनि हो टच नियन्त्रण। अन्य मोडेलहरू जस्तो छैन जुन हामी एक बटन फेला पार्छौं, जुन कहिलेकाँहि प्रेस गर्न असहज हुन्छ। उर्जा सिस्टेमको शहरी In मा नियन्त्रण नियन्त्रण छ। यसैले साधारण "स्पर्श" को साथ हामी गीत रोक्न सक्छौं, वा अर्कोमा जान सक्छौं.
डाटा पाना ऊर्जा Sistem शहरी 4
मोडेल शहरी 4
भोल्यूम नियन्त्रण SI
प्लेब्याक नियन्त्रण ट्याक्टाइल
अधिकतम संकेत शक्ति
अधिकतम अडियो शक्ति2मेगावाट
हेडफोन ब्याट्री M० एमएएच प्रत्येक
ब्याट्री चार्जर बक्स 380 mAh
हेडफोन आयामहरू 2.5 x 2.3 x 2.8 सेमी
बक्स आयाम 6.7 x 2.8 x 2.9 सेमी
हेडफोन तौल G g प्रत्येक
बक्स वजन 26 g
मूल्य 33.90 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम शहरी।
शहरी Pro मा ऊर्जा सिस्टेमबाट पेशेवरहरू र विपक्षहरू
ऊर्जा सिस्टेम सहरी wireless ताररहित हेडफोनको साथ केही हप्ताको परीक्षण पछि हामी तपाईंलाई धेरै कुरा भन्न सक्छौं। हामी भेट्छौं हामीले धेरै मन पराउने पक्षहरू। तर पक्कै पनि, अरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ उत्पादनको भविष्यका संस्करणहरूमा। यसको प्रयोगको अनुभवबाट, हामी तपाईंलाई हामीले भेट्टाएका प्रो र कन्सको बारेमा बताउनेछौं।
El वजन धेरै हल्का छ। एक विवरण जसले तिनीहरूलाई हेडफोन जडानको साथ दिनको धेरै घण्टा खर्च गर्न प्रयोग गर्नेहरूलाई खुशी पार्दछ।
मूल डिजाइन समानता बिना। अरूलाई पर्याप्त प्रतिलिपि गर्दै, तपाईंको आफ्नै र मौलिक डिजाइन बढी वा कम सफल, वा सुन्दर हुन सक्छ, तर यो तपाईंको आफ्नै र मूल हो।
टच नियन्त्रण हेडफोनमा। हामी कानमा थिच्नु पर्ने बटन नियन्त्रण भन्दा बढी सहज र प्रभावशाली हुन्छ।
को भवन निर्माण सामाग्री उनीहरूले रमाइलो स्पर्श प्रदान गर्दछन्, र प्रतिरोधी पनि देखिन्छन्।
धेरै हल्का तौल
तेस्रो पक्ष "प्रेरणा" बिना डिजाइन
हामी ब्याट्री स्तरको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्दैनौं हेडफोन वा चार्जर बक्सबाट।
भोल्युम स्तर हामीले मन परेको जस्तो उच्च छैन। उच्च बाहिरी आवाजको साथमा अधिकतम भोल्यूम पर्याप्त हुँदैन।
ब्याट्री स्तरको लागि एलईडी बत्ती छैन
भोल्यूम स्तर केहि छोटो छ
ऊर्जा सिस्टेम शहरी।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ऊर्जा Sistem शहरी4हेडफोन विश्लेषण
Google नक्सामा कसरी निर्देशांक राख्ने